Jaranjarada eyda, iska ilaali inaad la xanuunsato misigta moodooyinkaan | Eeyaha Adduunka
Susana godoy | 05/10/2021 15:11 | Qalabka eyga
Jaranjarooyinka waa mid ka mid ah agabka lagama maarmaanka ah ee aan ku haysanno nolosheena. Si aad awood ugu yeelatid inaad kor iyo hoos u fuusho dabaqyada ama dhererka kala duwan runtii waa lagama maarmaan. Sidaas darteed haddii aan aadno dunida xayawaanka, jaranjarada eyga waa laga tegi waayay. Waxay kaloo qayb ka yihiin noloshooda, gaar ahaan waqtiyo aad u gaar ah.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay tahay faa'iidooyinka ugu badan in ay na siinayaan jaranjarada eyda iyo sidoo kale isticmaalka aan siin doono iyo marka si buuxda loogu taliyo. Waxaas oo dhan iyo qaar kaloo badan, had iyo jeer ka fikira raaxada xayawaankeena, taas oo ah waxa runtii noo quseeya. Ma leedahay taada?
lionto by dibea Jaranjarada ...
Heerarka HXX Eeyaha ...
Pawhut Wooden sallaan ...
Jaranjarada Dake ee ...
Pawhut Ladder ee...
1 Sababta Isticmaalka Jaranjarada Eeygu U Habboon Yahay
2 Faa'iidooyinka isticmaalka jaranjarada eyga
3 Isticmaalka ugu badan ee sallaanka eyga
3.1 Fuulo sariirta ama fadhiga
3.2 Gaadhiga gal
3.3 Barkadda ka bax
4 Waxa la raadinayo marka la dooranayo jaranjarada eyga
5 Eeyga ayaa dhasha kaas oo lagu talinayo in la isticmaalo jaranjarada
6 Miyuu eey ama jaranjarada? Ikhtiyaarkee ayaa fiican?
7 Halkee laga iibsadaa jaranjarada eyda oo jaban
Sababta Isticmaalka Jaranjarada Eeygu U Habboon Yahay
Hagaag, waa jawaab aad u fudud, maxaa yeelay waxaa jira xayawaanno badan oo maalintii oo dhan sariirta ilaa fadhiga, samaynta boodbooyin oo mustaqbalka fog waxyeello u geysan kara caafimaadkooda. Noocyada qaarkood waxay leeyihiin laf dhabar dhab ah, taasoo u horseedi doonta dhibaatooyin gaar ah ama xanuunno kala duwan. Ma aha in la xuso in kala -goysyadu ay sidoo kale ka boodaan boodi kasta. Marka, waa lama huraan in la helo kaalmo iyo gaar ahaan marka xayawaanku sii weynaado. Marka, hadda waad ogtahay inay tahay mid ka mid ah aaladaha aasaasiga ah ee aad ugu baahan tahay noloshaada iyo tan kuwa dhogorta leh.
Faa'iidooyinka isticmaalka jaranjarada eyga
Waxay ka hortagtaa xanuunka dhabarka.
Waxay ka hortagi doontaa xayawaanku inay dib ugu boodaan marka ay rabaan inay nastaan.
Boodh kasta waxay dhaawici karaan kala -goysyadooda, taas oo, jaranjarada eygu ay ilaalin doonto oo daryeeli doonto.
Si la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah siyaabo fiican oo loo daryeelo lafaha, maaddaama ay yihiin kuwa ku xiga ee la ildaran boodbooyin badan, iyagoo awood u leh inay si dhaqso ah u jabaan.
Ma ogtahay in dhaawacyada badankood looga fogaan karo kaabis sidan oo kale ah?
Kor u qaad tayada noloshaada sababtoo ah jaranjarada eyga ayaan ku yarayn doonaa dadaalkaaga.
Isticmaalka ugu badan ee sallaanka eyga
Fuulo sariirta ama fadhiga
Mid ka mid ah caadooyinka ugu xididka badan ee eydu leeyihiin waa awood u lahaanshaha sariirta iyo fadhiga labadaba. Haddii aan halkaas joogno, way soo ordayaan oo mararka qaarkood, xitaa haddii aanan joogin, waxay og yihiin inay meel ku leeyihiin aaggaas. Laakiin waxaad samayn doontid waa caado, taas oo sidaan soo sheegnay aan u fiicnayn jirkaaga. Markaa, waxaan kuu dhigi doonaa sallaan si aan kuu tusno waddada saxda ah. Waa run in aysan habeen wax baran doonin, laakiin waxay ku samayn doonaan dulqaad yar. Markay la qabsadaan, waxay isticmaali doonaan uun sallaanka!
Caado kale oo aan maalin walba ku aragno xoolaheena ayaa ah in gaariga la fuulo. Markay aad u jilicsan yihiin, waxaa laga yaabaa inaysan ogaan karin laakiin waxyar ka dib waxay ku qaadan kartaa boodbooyin badan. Markaa halkaas jaranjarada ayaa iyana soo galaysa. Way ku qumman yihiin inay kor iyo hoos u koraan markaan iyaga la soconno. Ku caawinta inaad qaaddo tallaabooyinka saxda ah adigoon culeysin jirkaaga. Sidoo kale, ha ka welwelin haddii ay wasakhoobaan maxaa yeelay badankoodu waa sahlan yihiin in la nadiifiyo.
Barkadda ka bax
Haddii ay jecel yihiin inay ku dabaashaan barkadda, waxay awoodi doonaan inay nastaan ​​iyagoo samaynaya jimicsi yar taasina waa wax iyaga ku dhaca iyo annagaba. Laakiin qubeyska ka dib, bixitaanku wuxuu noqon karaa mid aad u dhib badan sidaa darteedna, ma jiro wax nagu caawiya inaan jaranjarooyinka qaarkood kor u qaadno. Waxay iyaga ku soo gaabin doonaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale, uma baahna inay sameeyaan dadaal isku mid ah. Marka, dhammaantood waa faa'iidooyin ay tahay in la tixgeliyo!
Waxa la raadinayo marka la dooranayo jaranjarada eyga
Tirada tallaabooyinka: Waxaan dooneynaa inaan u raaxeyno halyeyga marka ay timaaddo in meel laga dego ama laga dego. Sidaa darteed, jaranjarada eydu waxay yeelan kartaa dhowr tallaabo. Qaarkood waxay yeelan karaan laba tallaabo oo ballaaran, laakiin qaar kale oo badan ayaa leh in ka badan saddex ama afar. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inay aad u sarreeyaan oo haddii aan dooranno kaliya ikhtiyaarka laba tallaabo, inay la jiraan alaab jilicsan oo raaxo leh iyo dhammayn. Kaliya markaa ayaad barkin kasta ku boodi kartaa.
Dhererka tallaabada: Waan soo sheegnay oo mar kale ayaan faallo ka bixinaynaa waxa ugu fiican ayaa ah inaysan lahayn dherer badan iyo haddii ay jiraan tallaabooyin badan. Gaar ahaan eeyaha yaryar ama kuwa hore u lahaa nooc ka mid ah jirrada. Maaddaama habkan boodboodayaashu ay aad uga sii fiicnaan doonaan, iyada oo aan saamayn badan ku yeelan jidhkaaga.
Ballaca tallaabada: Si la mid ah marka la eego tirada tallaabooyinka, waxaan sidoo kale wajihi karnaa inaan helno ballacyo kala duwan. Raaxo ayaa ugu ballaaran, laakiin had iyo jeer ma aha inay sidan ahaato, maadaama cabbir dhexdhexaad ah waxay sidoo kale u oggolaan doonaan xayawaankayaga inuu si raaxo leh u dhaqaaqo.
Sugaya: Mar walba waxay ku xirnaan doontaa qaabka jaranjarada laftooda. Markaa mararka qaarkood waxaan ogaan karnaa in mid ka mid ahi uu ka badan yahay kan kale. Laakiin dhab ahaantii haddii ay leeyihiin dhowr tallaabo, isbeddelka si dhib yar looma dareemi doono. Waxa ugu fiican ayaa ah inaysan aad u dhaadheerayn oo ay kaliya raaxada siiso xayawaankayaga.
Haddii ay isku laaban yihiin: Waxaan haynaa ikhtiyaarka ah inaad doorato kuwa isku laabma. Faa'iidadooda weyn ayaa ah in aan meeleyn karno kaliya markaan dooneyno inaan isticmaalno. Haddii kale, waxay qaadan doonaan meel aad u yar oo waxaan ku kaydin doonaa gees kasta ama sariirta hoosteeda. Si aysan marna uga hor istaagin marka xayawaanku aysan isticmaalin.
Waxyaabaha: Alwaaxdu waa mid ka mid ah qalabka ugu badan ee kiisaskaan la isticmaalo. Laakiin si aad u yara raaxaysato, waxay noqon kartaa mesh la huwiyey ama leh daboollo jilicsan, taas oo taabashadeeda ka dhigaysa mid aad u jilicsan. Dabcan, had iyo jeer la soco tallaabooyinka lidka-siibidda oo aad daboolkiisa si raaxo leh u dhaqi karto. Dabcan, dhinaca kale, waxaad sidoo kale leedahay qaabab caag ah, ka fudud oo si siman u adkaysi leh.
Eeyga ayaa dhasha kaas oo lagu talinayo in la isticmaalo jaranjarada
Si guud u hadlida, jaranjarada kor iyo hoos looguma taliyo eey kasta. Laakiin waa run in mar walba ay jiri doonaan waxyaabo ka reeban. Xaaladdan oo kale, waxaan dhihi karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee ka kooban lugaha gaagaaban iyo jirka dheer ayaa u baahan doona kabitaankan maalin kasta. Sababtoo ah qaar baa jecel dachshunds ama dachshunds, bassets ama xitaa corgi aad bay u nugul yihiin taasina waxay kicin kartaa dhibaato misigta, lafaha iyo kala -goysyada.
Dabcan sidoo kale jinsiyadaha sida Labrador ama Adhijirka Jarmalka ayaa ku xanuunsan kara misigta laakiin si la mid ah sidoo kale lafdhabarta. Sababtoo ah marka la boodayo waa la cadaadiyey oo wuxuu rabaa inuu rarto wax ka badan sidii loo baahnaa. Markay weynaadaan, way ka sii daran yihiin, laakiin waa run in dhallaanka ilaa 4 bilood ay sidoo kale u baahan doonaan caawimaad. Taxaddar kasta wuxuu u roon yahay xayawaankayaga!
Miyuu eey ama jaranjarada? Ikhtiyaarkee ayaa fiican?
Waa su'aasha weligeed ah, maxaa yeelay dhexdeeda waa inaad had iyo jeer bixisaa dhowr tayo si aad u sameyso xulasho wanaagsan. Marka hore, miisaam dhererka iyo aagga la dhigi doono, ha ahaato fadhiga ama sariirta iyo haddii ay jirto meel ku filan labada doorasho. Dabcan, dhanka kale iyo midda ugu muhiimsan ayaa ah, haddii ay tahay ka -hortag, markaa jaranjaradu waa dhinacaaga. Laakiin haddii eeygaagu leeyahay wax jirro ah ama dhibaato jidheed markaa sagxadku waa ka fiican yahay si uusan u khasbin.
Sidaas si la mid ah, haddii uu yahay eey lug-gaaban leh, sidaan soo sheegnay, sagxaddu waxay kaloo noqon kartaa saaxiibkaaga ugu fiican. Haddii aan aragno inaad furi kartid waddooyinka qaarkood markaan waddada tagno, markaa waxaad dooran kartaa sallaanka. Sidaad aragtaan, Waa inaan had iyo jeer ka fikirnaa raaxada weyn ee xoolaheenna iyo xaddidnaantooda haddii ay leeyihiin.
Halkee laga iibsadaa jaranjarada eyda oo jaban
Amazon: Sidee bay u yaraan kartaa, Amazon had iyo jeer waxay haysataa wax kasta oo aad u baahan tahay oo kiiskan lagama tegi doono. Sababtan awgeed, jaranjarada eeyaha dhexdooda waxay nagu la yaabtaa fikradaha isku laabma iyo kuwa la saari karo, oo leh dhammaystir iyo qalab kala duwan. Laakiin had iyo jeer la dhammaystir aan dhammayn.
Kiwoko: Dukaanka Kiwoko wuxuu kaloo u heellan yahay jaranjarada eyda iyo wax ka badan, kuwaas oo loo soo bandhigay saddex tallaabo, maxaa yeelay waxay maareeyaan inay si ka sii fiican u caawiyaan xayawaankayaga. Markaad saf gasho waxaad heli doontaa raaxo, ilaalin iyo jilicsanaan dheeraad ah.
Tendenimal: Ikhtiyaaraadka ugu raqiisan ayaa sidoo kale laga helaa dukaankan, iyada oo aan la iloobin in ay sidoo kale leeyihiin dhammaystirro kala duwan oo caag ah ama la safay, kuwaas oo had iyo jeer ka caawiya xulashada kan ugu fiican xagga jaranjarada eeyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Jaranjarada Eeyaha